Sirdoonka Soomaaliya oo hakiyay qandaraasyo lacago badan ay ku baxayeen – The Voice of Northeastern Kenya
Sirdoonka Soomaaliya oo hakiyay qandaraasyo lacago badan ay ku baxayeen
War qoraalka oo kas oo baxay xafiiska hay’ada Nabad Sugida iyo sirdoon qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa lagu sheegay in gabi ahaanba la joojyay qandaraaso malaayiin dollar ku gacayay oo horay loo saxiixay.
Warka NISA ka soo baxay ayaa lagu sheegay in qandaraaskaan hada la hakiyay uu horay u saxiixay wasiirkii hore ee wasaarada Amniga Soomaaliya maadaa sida la sheegay uu jiro shaki qandaraaska laga qabo qaabka loo maareeyay.
Hay’ada NISA ayaa sheegtay in kadib markii ay hakisay qandaraaskaas ay ku wareejisay xafiiska hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya si uu baaritaano iyo daba gal ugu sameeyo kadibna u soo xaqiijiyo qaabkii loo maareeyay qandaraaskaan.
Qaar ka mid ah hay’ada dowlada Soomaaliya ayaa horay looga soo tabiyay falal la xiriira Musuqmaasuq waxaana sidoo kale jira masuuliyiin ka tirsanaa hay’adaha amniga iyo wasaaradaha qaar oo xabsiga loo tabaaxay kadib markii lagu eedeeyay inay ku kaceen falal wax is dabamarin ah.
Dhanka kale Xildhibaan C/risaaq Cumar Maxamed horayna u soo noqday wasiirka amniga xilligii dowladdii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay qoraalka ka soo baxay Hay’adda Nabadsugida qaranka Soomaaliya NISA.
Qoraal uu soo dhigay Bartiisa Twitter-ka ayuu wasiirkii hore ee difaaca Soomaaliya ku sheegay in Warka NISA uu yahay dacaayad wuxuuna nasiib darro ku tilmaamay in hay’da NISA ay Faafiso waxa uu ku tilmaamay war aan xaqiiqo ahayn.
Waxa uu sheegay in NISA Masuul xil horay u hayay si daahfurana xilkaas ugu wareejiyay Masuulkii xilka kala wareegay ay dacaayad raqiis ah sida uu hadalkiisa u dhigay baraha bulshada u soo dhigaan 2 sano ka dib iyado loga gol leeyahay in la isku cabsi geliyo arintaas sida uu sheegay xildhibaankaan horay u soo noqday wasiirka amniga Soomaaliya sidoo kalena warka ka soo baxay hay’ada sirdoonka Soomaaliya lagu sheegay in qandaraas uu horay u saxiisay la joojiyay maadaama Musuq looga shaki qabo.
← Soomaaliland oo dadaal ugu jirtay heshiisiinta Beello ku dagaalamay gobolka Sool
Wariye xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho →